Säpo oo qatar weerar oo ka dhan ah Sweden ka digtey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Kassman, madaxa howgalada Säpo. Foto: TT
Säpo oo qatar weerar oo ka dhan ah Sweden ka digtey
Weero laga digey
La daabacay torsdag 8 januari 2015 kl 14.45
Booliiska amniga Sweden Säpo ayaa isha ku haya dhacdadii shalay lagu weeraray wargeyska majaajileysta ah ee Charlie Hebdo magaalada Paris dalka Fransiiska. Anders Kassman waa madaxa howl-galka Säpo ayaa sheegay in ay jirto qatar weyn oo ah in weerarada noocaan ah ay ka dhacaan dalkan Sweden:
- Waxa Fransiiska ka dhacay waa wax u eg sawirka qatareed ee ku wajahan Sweden. Qatar waxay tahay mid u dhiganta weerarkaan oo kale in uu ka dhaco Sweden, ayuu Anders Kassman.
Waxuuna intaas raaciyey in ay suurtagaltahay in weerarkan uu dhiiro geliyo kooxa kale in ay weeraro argagaxiso ku qaadaan xaruumaha warbaahinta Sweden.
- Qatar noocaan ah mar kasta wey jirtaa, inkastoo aysan wax caadii ah aheyn waxaan oo kale markey dhacaan in wax u dhigma islamarkiiba dhacaan.
- Laakiin mar kasta dhacdooyinka noocaan ah saameyntooda ayey yeeshaan, ayuu raaciyey Anders Kassman oo howl-galada u qaabilsan booliiska amniga.
Jihaadiin Sweden ku sugan oo soo dhaweeyey weerarka
Sida telefishinka SVT maanta baahiyey waxaa jira kooxa jihaadiyiin ah oo ku nool Sweden kuwaas oo alaadda bulshada Facebook ku daabacay qoraalo ay ku soo dhaweynayaan weerarkan shalay loo geystey wargeyska farshaxan laha ah ee Charlie Hebdo. Qoraalada ay kooxan ku soo bandhigeen facebook ayaa waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid ahaa ”Ilaahey waxaan ka baryeyna in uu weerarada nocaan ay bataan, wallaalaha ka qayb galana weeraradan uu abaal mariyo”.
Kooxdan bogga ay ku leeyahiin Facebook ayaa ah mid xiran oo aan u muuqan dadka aan xubinta ka aheyn. Mid ka mid ah qoraaladooda ayaa u dhignaa sida tan. ”Qaansiiradan waxaa loo direy jahanama. Waxayna ka sameeyeen farshaxano jees jees ah namibega.
Wargeysayada farshaxadana satir-ka (majaajilada ah) sameeya Nabi Maxamed iyo Islamka ayeysan aheyn markii ugu horeysey ay wajahaan weeraro iyo hajabaado. Sannadkii 2010 ayey aheyd markii wargeyska Jyllands-Posten ee ka soo baxa Danmark ka sameeyey sawiro farshaxan nabi Moxamed. Farshankaas oo dunida Muslimka ka abuurey mudaharaadyo caro wata. Sidoo kalena wargeyska iyo shaqaalahiisa ayaa marar badan la kulmay weeraro iyo hanjabaado. Afar rag ah oo ka tagay Sweden kuwaas oo qorsheynayey weeraro ay ku qaadan wargeyskan ayaa sannadkii 2012 xukuno dhaadheer lagu riday ka dib markii lagu qabta dalka Danmark iyo ayaga oo ku howlan weerar ay ku qaadaan wargeyskan.
Wargeysada dalkan Sweden ee ayaguna daabcay farshaxano ka dhan ah nabi moxamed ayaa ayaguna la kulmey hanjabaado.
Ulf Johansson waxuu horey ahaan jirey tafatiraha Nerikas Allhanda, wargeyskaas ayaa asna daabacay sawiro uu nin farshaxamiiste ah oo la yirahdo Lars Viks ka sameeyey Nabi Moxamed oo loo ekeysiiyey ey. Go’aankaa uu daabacay sawiradaas ayuu Ulf Johansson kalo kulmay hanjabaado isdaba joog ah, sida uu yeri:
– Daabacaadaas waxay dhalisey hanjabaado isdabo jooga ah oo ay ku jiraan hanjabaado dil. Markii horey waxay ku billaamantay mudaharaadyo wargeyska ka dhan ah balse way sii faaftey iskuna badashay hanjabaado dil iyo weliba in madaxeyga la dul dhigo lacag, ayey yeri.
Ulf Johansson waxaa madaxiisa lacag duldhigay hogaamiye ka tirsan kooxda argagaxisada ah ee Al-qaacida, sida uu sheegay. Hanjabaadaha waregyska iyo shaqaalahiisa loo geysnayey ayaa sida uu shaagay Ulf waxay keentey in wargeyska ka fakero amingiisa.
Ulf Johansson maanta waxuu tafatire ka yahay qaybta wararka ee telefishinka Svt. Waxuu yeri weerarkii shalay lagu xasuuqay 10 ka mid ah shaqaalaha wargeyska Charlie Hebdo iyo labo ka mid ah booliska magaalada Paris waa fal waxuushnimo ah oo aad looga naxo. Waxuuse intaas ku daray in weerarkan waxuushnimada ah uusan saameyn ku yeelan doonin madax-banaanida saxaafadda iyo xoriyadda haddalka midkoodna, balse loo baahan yahay in si guud looga hadlo sidii ay saxaafadda uga gaashaman laheyd qataraha iyo hanjabaada la wajahayo.
Weerarka shalay lagu laayey shaqaalaha wargeyska Charlie Hebdo ayeysan illa iyo hadda jirin koox si gooni ah masuuliyadiisa u shaagatay. Balse waxaa loo badaniyaaa in dadka weerarkan geystay ay yahiin islaamiyiin. Ruuxa ka badbaadey weerarkan ayaa sheegay in raggii weerarka geystay ay goobta ka sheegeen in weerarkooda ay ugu aargudayaan nabi Moxamed madaama wargeyska ka sameeyey nabiga ”farshaxano dacaayed ah”
Wararkii ugu dambeeyay ee weerarada Paris